TOVOLAHY MAMO RONGONY : Matin’ny fitsaram-bahoaka rehefa avy nandatsak’aina ny reniny
Nandriaka ny rà tao amin’ny tanàna antsoina hoe Tanibe. Kaominina izy io ary ao amin’ny distrikan’i Mananara-Avaratra no misy azy. 14 février 2019
Ny harivan’ny alarobia 13 febroary lasa teo, novonoin’i Mananjara Gilbert ho faty i Zafiroa reniny niteraka azy. Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana, dia mamon-drongony ilay tovolahy tamin’io fotoana io, ka izao nahavita nandatsak’aina ny reniny izao. Notetitetehiny tamin’ny antsy ity reniny nahitany masoandro. Tsy namelany raha tsy tapitra ny ainy.
Tsy nisy fifamaliana teo amin’izy mianaka mialohan’io fa nilamina tsara, hoy hatrany ny fampitam-baovao avy amin’ny mponina ao Tanibe Mananara-Avaratra.
Nandositra i Mananjara Gilbert taorian’ny habibiana nataony io. Tsy niandry ela kosa ny fokonolona tao an-toerana fa nandray andraikitra avy hatrany nikaroka azy ka niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka. Notaperin’ny fokonolona ny ain’ilay tovolahy namono ny reniny. Faty roa arak’izany no niampatra tao Tanibe.